कहिले आउला4पेशाप्रति गौरव गर्ने क्षण ?
अर्चना बगाले, नर्स
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 4को स्थान अत्यन्त माथि छ । मानिसहरुले यो पेशालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छ । व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्वेषणसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाएको छ यो पेशाले ।
योग्यता अनुसारको कार्यक्षेत्र अनि आफ्नो पेशाप्रतिको गौरव सबै व्यवस्थित छन् । तर नेपालमा भने ठीक उल्टो छ । यो पेशा कहिले व्यवस्थित हुन्छ, अनि यसप्रति गौरवान्वित हुने क्षण कहिले आउछ भन्न सकिँदैन । अध्ययनअनुसारको जागिर जति मुस्किल छ, पेशाले पाउने सम्मान उस्तै छ । अनि, अव्यवस्थित प्रणाली पनि छ यहाँ ।
लाखौं खर्च गरेर पढेपनि र दक्ष हुँदाहुँदै पनि महिनौ स्वयंसेवा गर्नुपर्ने विडम्बना कायमै छ । आवश्यक भएपनि सरकारले दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, 23 पनि नगर्ने र माथिल्लो ओहोदामा भएकाहरुले दक्ष जनशक्तिलाई माथि आउन नदिने प्रवृत्तिले थप बेथिति पैदा गरेको छ ।
4सँग सम्बन्धित संघसंस्थाले पेशागत हकहितका लागि कुनै कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । कति अध्ययन गरेपछि र कति दक्षता हासिल गरेपछि4जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने केहि रणनीति छैन । यस्ता बेथिति अन्त्य भए पेशाप्रति गौरव गर्न सकिन्थ्यो र उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकिन्थ्यो ।
प्राज्ञिक क्षेत्रमा जान के–के दक्षता हुनुपर्छ, अस्पतालका लागि के–के हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन । अस्पताल तथा 4सम्बन्धी शैक्षिक संस्थामा समान रुपमा सेवा–सुविधा छैन । जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेकाहरु ज्ञान भएपनि लागुू गर्न खोज्दैनन् या जान्दैनन् । अनि जति पढे पनि या जति दक्ष भएपनि तल्लो पदमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वास्थ्यका माथिल्ला निकायले नै4पेशाका लागि दर्हो रणनीति बनाएर दक्ष जनशक्तिलाई आफ्नो योग्यताअनुरुप काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सके नर्स क्रम पनि न्युन हुन्थ्यो र आफ्नै देशमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुने थियो । अनि विदेशमा जसरी हामी पनि हाम्रा नर्स प्राक्टिसनर, अनुसन्धानकर्ता, व्यवस्थापक, नर्स, क्लिनिसियनजस्ता पदमा बसेर कार्य गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना हुन्थ्यो र यस क्षेत्रमा रहेका बेथितिहरु स्वतः व्यवस्थापन हुने थियो ।
उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले कुराभन्दा काम गरेर4जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सके निराश हुनुपर्ने बाध्यता स्वतः न्युन हुने थियो । अनि पेशाको हित पनि हुने थियो ।
पिसिएल4गरेर स्कील्ड बर्थ एटेन्डेन्ट (एसबीए) गरेका व्यक्तिले लेबर रुममा काम गर्दा दक्षता बढ्छ । बीएन मिडवाइफरी अनि एमएन म्याटर्नल हेल्थ4गरेकाले डेलिभरी लिन नपाउने वा एसबीए तालिम चाहिने भए किन यी विषयमा माथिल्लो तहमा पढाई गर्नुपर्‍यो त ?
यस्तो अवस्थामा पनि नर्सका हकहितका लागि खुलेका संघसंस्था किन चुप छन् ? जुन विषयमा विज्ञता हासिल गरेको हो, त्यही विषयमा क्लिनिकल अभ्यास गर्न नपाउने हो भने यी विषय पढाउने शैक्षिक संस्थाले यसको जिम्मेवारी लिनुु जरुरी छ । र, आफुुले उत्पादन गरेका जनशक्तिका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।